Maamul Goboleedka Puntland iyo Hogaamiye kooxeedyaadii ka talin jiray koofurta Somalia iyo Magaalada Caasimada ah Muqdisho Hadaba Maxaa ay ku kala duwanyihiin, Maxaa ay is dheeryihiin iyo Maxaa ay isaga mid yihiin.
Maamul goboleedka Puntland oo dhab ahaantii ka mid noqdey maamuladii looga dhawaaqay dalka Somalia kadib burburkii Xukuumadii uu madaxda u ahaa allaha u naxariistee Maxamed Siyaad Barre, iyadoo uu dhab ahaantiina si wanaagsan uga hirgaliyey gobolada lagu magacaabo Puntland oo ilaa haatana uu ka taliyo.
Maamulkaan ayaa ah dhab ahaantii ah maamul aanan sheegan inuu gooni isaga taagay gobolada kale ee dalka Somalia, iyadoo ilaa haatana uu shaqeeyo hase ahatee aanan ahayn sidoo loogu talo galay inuu ku shaqeeyo.
Hadaba Cinwaakeenu waxaa weeye Maamul goboleedka Puntland iyo Hogaamiyayaashii looga itaal roonaday magaalda Muqdisho maxaa ay isaga egyihiin, hadaba arimahaan ayaa usoo qaadanaya kuwa ugu muhiimsan oo ay isaga midka yihiin iyadadoo arimahaan aan mid mid uga hadli doono:-
1. Caburinta Shacabka iyo Saxaafada.
2. Dilalka Qorsheysan ee loo gaysanayo Aqoonyahanaha, Saraakiisha iyo Culumaa’udiinka.
3. Afduubka dadka Ajaanibta ah iyo Culumaa’udiinka.
4. Lacagaha been abuurka iyo kala qeybinta bulshada.
5. Taageerida Burcad badeedka.
Hadaba arimahaan ayaan mid mid ugu soo qaadan doonaa maqaalkeena manta iyadoo aan u kala hormari doono sida ay kula horeeyaan.
Caburinta Shacabka iyo Saxaafada.
Hadaba maamul goboleedka Puntland waxaa ka jira cadaadis badan oo lagu haayo shacabka ku dhaqan Puntlannd iyo Saxaafada xorta ah iyadoo aanan loo ogoleyn Saxaafada Madax banaani in ay ugu gudbiso wararka iyo afkaarta bulshada ku dhaqan degaanada puntland, iyadoo lagu eedeynayo hadii ay warar ka dhan ah maamulka goboleedka puntland ay sheegaan, inay taageero u yihiin waxa ay ugu yeereen Argagaxiso, sidaana ay ku mutaysanyaan xarig iyo jirdil.
Hase ahaatee arinkaan ayaa ah mid lagu yaqaanay hogaamiyayaashii ka talin jiray gobolada koonfurta Somalia oo ay ku jirtay magaalada Caasimada ah ee Muqidsho iyadoo markii dambena looga itaal roonaday goobihii ay ka talinayeen kadib markii uu dhacay kacdoon shacab oo ya hogaaminayeen Maxkamadihii Islaamig, kaasi oo looga soo horjeeday dhibaatooyinkii, dhaca, boobka, kala qaybinta shacabka, afduubka iyo dilka ay ku hayeen bulshada ku dhaqan deeganadii ay ka talin jireen.
Sidoo kale dhanka shacabka ayaa iyagana ah kuwa dhibaatooyin isugu jira xarig iyo jir dil oo aan sharci ahayn kala kulmay dhanka maamulka Puntland.
Dilalka Qorsheysan ee loo gaysanayo Aqoonyahanaha, Saraakiisha iyo Culima’udiinka.
Gobalada ay ka taliyaan maamul goobleedka puntland ayaa waxaa baryahaan kusoo badanayay dhac, dilal qorsheysan iyo afduub lagula kaco wadaadada
Magaalada Galkacyo oo ah magaala madaxda gobolka Mudug ayaa hadana ah magaalo hoos tagto maamul goboleedka Puntland iyada oo ay baryahaan kusoo badanayeen dhac loo gaysanayo gawaarida safarka, sidoo kale waxaa jira dilal loo gaysanayo dad safarka iyadoo arinkaasina aysan waxba ka qabanayn maaulka Puntland oo ay u muuqato amaan dari kusii badanaysa gobolada Puntland.
Dhan kale waxaa jira dilal qorsheysan oo ku soo badanayan dhawaanahaan magaalada madaxda maamul goboleedka puntland Garowe kuwaasi oo loo gaysanayay aqoonyahano, saraakiil iyo culimo ku dhaqan goboladaasi Puntland.
Afduubka dadka Ajaanibta ah iyo Wadaada.
Gobolada Puntland oo ka mid ahayeen meelaha ugu nabdoon kadib dagaaladii sokeeye ayaa waxaa mudooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayey afduub lagula kaco dadka ajaanibta iyo muwaadiniin Somali ah, iyaga afduub ka loo gaysanayo xili ay ku guda jira hawlahooda shaqo ama ku sugan hoygooda.
Dad farabadan oo ajaanib ah kuwaasi oo hawlo shaqo u yimid gobolada Puntland ayaa waxaa loo gaystay xarig iyaga oo ku guda jira hawlo shaqo, halka qaarkoodna iyaga oo dib uga laabanayay goboladaasi laga qabtay garoomada laga duulo ee gobolada Puntland, waxaana ugu dambeeyey Dhaktar Kenyan ah asalkisuna yahay Somali kaasi oo lagu eedeeyey waxa ay ugu yeereeyn falal argagaxisanimo.
Sidoo kale waxaa jira dad muwaadiniin Somali ah kuwaasi oo kasoo jeeda gobolada Ogaadeeniya oo loo gacan geliyey dowlada Ethopia iyada oo lagu eedaynayo madaxda maamul goboleedka Puntland inay falkaasi ay gaysteen.
Lacagaha been abuurka iyo kala qeybinta bulshada.
Lacagaha been abuurka ah ayaa ah kuwa kusoo badanayey gobolada koonfurta Somalia kuwaasi oo sida la sheegay laga keeno dhankaa iyo maamul goboleedka Puntland, waa sida ay xaqiijiyeen madax ka tirsa maamul goboleedka Puntland.
Lacagaha faalsada ah ayaa ka qaybqaatay dhibaatooyinka ugu badan ee ku dhacayay dadka rayidka ah mudooyinkii ugu dambeeyey, iyaga oo si wayn uga qayb qaatay sicir bararka baahsan ee ka jira gudaha dalka Somalia xili lagu guda jiro abaaro iyo xasarado ka oogan inta badan gobolada koofurta Somalia haba ugu darnaatee magaalada caasimada ah ee Muqdisho, hadaba waxaa xusid mudan in magaalada muqdisho laga diiday lacagaha 1000-ka shilling oo duuga ah iyada ay ka jiraan dhibaatoyin ka dhan ah bini’aadanimada hadana waxaa cunaqabatayn la saaray shacabka oo ay qayb wayn ka qaadanaysay lacagaha faalsadaha ee sida la sheegya lagu sameeyo Puntland..
Waxaa lacaga faalsada ah ay gaarsiiyeen sarifka $100.00 dollar 3,700,000 Sh.Somaliga ah tasina waa ay ku tusaysaa halka ay gaartay qiimaha maciishada qutul daruuriga iyada oo keentay in dadka ka barakacy magaalada muqdisho inay awoodi waayaan iibsashada maciishada qutul daruuriga iyadoo arinkaana ay kaliftay inay cunaan haragaha xoolaha iyo waxii ay arkaanba oo qoyan.
Taageerida Burcad badeedka.
Taageerida burcad badeeda ayaa ah arin si weyn looga bartay madaxda maamul goboleedka Puntland iyada oo sheega inaysan awoodi karin inay burcad badeeda ka ilaaliyaan xeebaha Puntland, waxase jirta in Mar ay idaacada BBC-da way diisey wasiir ka tirsan dowlad goobleedka Puntland Ma awoodi wayseen inaad Burcad badeeda ka ilaalisaan xeebaha Puntland? waxa uuna ku jawaabay anaga ma lihin awood aan isiga dhicino, waxaa yaab ah in dhaqaalaha ugu badan uu kasoo galo Puntland xeebaha oo hadana ay awoodi weyso inay ka dhiciso burcad badeeda, waxaa kale oo arin yaab leh in markii la afduubto maraakiibta la geeyo degaano ay ka taliyaan dowlad goboleedka Puntland deetana ay dhahaan anaga ma awoodno inaan iska dhicino burcad badeeda iyada oo ay joogaan deegaanada ay ka taliyaan dowlad goobleedka Puntland.
Hadaba aqristaw maxaa keenay in maamul goboleedka Puntland ay awoodi waayeen inay burcad badeeda ka ilaaliyaan xeebaha Puntland, oo ay wadaado iyo dad rayid ah ku qabqabtaan gudaha gobolada Puntland kuwaasi oo inta badan aanan waxba dambi ah galin, waxii fikradaaada ah noogu soo dir E-mail:- Muxsin55@hotmail.com
Arinkaan ayaa u muuqda mid ay ku lug leeyihiin madaxda sar sare ee dowlad goboleedka Puntland iyada oo ay raali uga yihiin buracad badeeda inay ka qaraabtaan xeebaha Puntland, oo ay heshiis ku yihiin in la afduubto maraakbita.
Waxaa isla sanadkaan gudahiisa xeebaha Puntland lagu afduubtay markab ganacsi oo laga leeyahay Dubai kaasi oo u socday dhankaa iyo Puntland oo sida la sheegay xiriir ganacsi la leh , waxa ayna ciidamada dowlad goboledka Puntland kusoo furteen awood, hadaba aqristow maxaa keenay in Puntland ay maraakiibta ayaga usocta ay awood ku soo furtaan kuwa kalana awodi waayaan inay soo furtaan oo indhaha ka laabtaan.
Habada maamul goboleedka Puntlnad waxa aan kula talin lahaa inay dhibaatooyinkan ay umada ku hayaan ka daayaan waayo waxaa laga yaabaa in shacabka reer Puntland ay u adkaysan waayaan oo ay kacdoon ku sameeyaan taasian ay soo dadajiso in maamulka hada ja kira Puntland uu meesha isaga baxo.
W/D: Cabdikariin Maxamed Jimcaale (Muxsin)